Maxaa dhacaya wareysi imtixaanka jinsiyadda ah? | USAHello | USAHello
Naturalization waa hab ah in aad ka dhigaysa muwaadin u dhashay Mareykanka of America. imtixaanka jinsiyadda The, ama imtixaanka dhalashada, Waa wareysi uu. Waxaad la weydiin doonaa su'aalo ah sarkaal Citizenship and Immigration Services. Wareysiga waa talaabo muhiim ah noqoto muwaadin Mareykan ah. Raadi wax ku saabsan imtixaanka jinsiyadda iyo sida loo diyaariyo wareysiga.
imtixaanka jinsiyadda waa mid ka mid ah dhawr talaabo ee geedi socodka si uu u noqdo muwaadin Mareykan ah. By waqtiga aad ka qayb waraysigaaga, waxaad u baahan doontaa:
hubiyaa in aad tahay xaq u leedahay inaad codsato dhalashada
diray foomka codsiga aad (the-N 400) in dalbato jinsiyadda
dhameystirtay ballan astaan ​​gaar ah iyo baaritaanka asalka
imtixaanka dhalashada ka hor
Marka dhan waraaqaha waa complete, United States ah Citizenship and Immigration Services (USCIS) diri doonaa ah ogeysiis ballan. Ogeysiiska wuxuu kuu sheegi doonaa taariikhda iyo waqtiga aad wareysiga.
Wareysiga waa tallaabo la soo dhaafay in uu noqdo muwaadin. Marka aad gudubto imtixaanka jinsiyadda aad, waxaad awoodi doontaa inaad noqoto muwaadin Mareykan ah uu noqon doono.
Isku diyaarinta waraysiga imtixaanka jinsiyadda
Waxa ugu fiican ee aad samayn karto si guulaysteen aad wareysiga jinsiyadda lagaa waa: in loo diyaar garoobo!
In loo diyaariyey hab samaynta Hubi reading Ingiriisi, hadalka iyo xirfadaha qoraalka ku fiican yihiin in ku filan. Waxaa sidoo kale ka dhigan tahay in ay diyaar u tahay imtixaan Civics ah. Hubi in aad fahanto oo dhan su'aalo lagu weydiin doonaa inaad inta lagu guda jiro wareysigaaga.
Haddii aadan diyaar u, Waad awoodaa saxiixdo fasallada online our free si aad u diyaariso imtixaanka dhalashada ka.
Waxyaabaha aad soo qaadan
Loo diyaarinayo wax walba oo ay sidoo kale ka dhigan tahay isagoo aad u baahan tahay in aad qaadato si aad waraysiga.
Waa inaad keentaa waxyaabaha soo socda aad la:
Your ogeysiis ballan
Your Resident Card Joogtada ah ama Kaarka Diiwaangelinta Alien (kaadhka cagaaran)
liisanka darawalnimada ama kaadhka aqoonsiga ee gobolka-saartay
All baasaboorada hadda oo dhacay ama dukumeentiyada lagu safro
Waxa kale oo laga yaabaa in aad rabtid inaad keento:
Nuqul ka mid ah oo aad foomka codsiga N-400 si aad tixraac gaar ah
A Liiska oo ka mid ah 100 su'aalo in sarkaalka soo qaado doono 10 su'aalo ka (xusuusnow in qaar ka mid ah jawaabaha, sida magaca madaxweynaha, beddeli doonaa. Liiska Tani waxay kuu sheegi doona meesha laga helo magacyada hadda).
Waxaa laguu oggol yahay in la keeno qareenkaaga haddii aad leedahay mid ka mid ah.
Your ogeysiis ballan kuu sheegi doona haddii aad u baahan tahay inaad dokumentiyo kale, sida guurka ama furriin shahaadooyinka, waraaqaha canshuurta, ama dokumentiyada la sameyn kartid xaaskaaga ama caruurta.
Maxaa dhici doona imtixaanka jinsiyadda aad
Haddii aad og tahay waxa dhici doona inta lagu guda jiro wareysigaaga, aad diyaarin kartaa. Oo haddii aad diyaar u yihiin, ma waxaad u baahan doontaa in aad dareento habdhiska! Tani waa waxa aad u baahan tahay inaad ogaato:
Hubi in aad ogaato meesha aad sidaas socday aadan helin waxaad lumay oo soo daahdo. laga yaabaa in aad rabto in aad u safarto dhismaha maalin ka hor ballantaada si aad u ogaato sida saxda ah, halkaas oo xafiiska ay tahay iyo sida ay halkaas ka heli.
Waxaa wanaagsan in ay yimaadaan nus saac ah hore ballantaada. Waxaad u baahan doontaa waqti in ay dhex maraan bar kontorool ammaan oo aad u hesho xafiiska xaq iyo degaanka sugitaanka. Sidoo kale, haddii aad hore u jiraan in yar oo ah, waxaad dareemaysaa ka yar loola cararay iyo dareemayaasha.
Waxaa laga yaabaa inaad sugto intii muddo ah ilaa uu leexan,. Waxaad isticmaali kartaa waqti aad u eegaan qaab ama imtixaanka aad su'aalo. Sarkaalka USCIS waxay ka soo bixi doonaan oo magacaaga soo wac marka ay leexan,. Waxaad xafiiska gaar ah u tegi doonaa. Ka hor inta aadan fadhiistaan, Sarkaalka ayaa ku weydiin doonaa inaad gacantaada kor u qaad oo ballanqaaddo in aad runta u sheegto.
Baarista aad ku hadalka luqadda Ingiriiska
Inta lagu jiro wareysiga, Sarkaalka la hubiyo in samaynta macluumaadkaaga yahay run iyo sax. Isaga ama iyada ayaa ku weydiin doona in badan oo su'aalo ku saabsan macluumaadka ku saabsan codsigaaga (Form N-400). Isla mar ahaantaana, isaga ama iyada la imtixaami aad xirfadaha luqadda Ingiriisiga.
Qaar ka mid ah shaqsiyaadka waayeelka ah iyo dadka qaar oo leh dhibaatooyin caafimaad ama naafada ah maskaxda waxaa laga yaabaa xaq u leedahay marka laga reebo ah in looga baahan yahay luqadda Ingiriisiga.
su'aalo Background iyo foomamka soo wareegtay
Sarkaalka wuxuu ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan asalka. Isaga ama iyada ayaa laga yaabaa in ay su'aalo ku weydiiyaan aan foomka codsiga. Isu diyaari, waayo, su'aalo laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad.
Marka su'aalaha ay dhammaadaan, waxaad u baahan doontaa inay la soo wareegto a waraaqaha yar, oo ay ku jiraan codsigaaga iyo sawiro aad.
civics imtixaanka, xirfadaha akhriska iyo qoraalka
Dadka intooda badan waxay sidoo kale yeelan doonaan in ay qaataan imtixaanka ku saabsan cilmiga bulshada Maraykanka, taariikhda iyo dawladda. Tani waxay qayb ka mid ah Waraysiga sarkaalkaaga isku waxaa laga yaabaa in, ama la qof oo kala duwan waxaa laga yaabaa in. Waxaa iman kara marka hore ama dhamaadka.
Inta lagu jiro imtixaanka this, waa in aad ka jawaabto 6 ka mid ah 10 su'aalaha si sax ah oo ku saabsan cilmiga bulshada Maraykanka. Su'aalaha iyo jawaabaha waa lagu hadlo. Waxaa jiri doona qayb ka mid ah qoraal gaaban oo imtixaanka si ay u tijaabiso aad xirfadaha qoraalka. Sarkaalka wuxuu kuu sheegi doonaa xukunka ah in la qoro. sidoo kale waxaa lagu weydiin doonaa in aad ka akhrisan xukun. Mar labaad, aad diyaarin kartaa oo dhan su'aalo lagu weydiin doonaa inaad inta lagu guda jiro wareysigaaga.
Dad tiro yar ma aha inay qaataan imtixaanka this. Waxaa jira marka laga reebo qaar ka mid ah dadka da'da ah ama dadka leh arrimaha caafimaadka ama naafada ah.
Waad awoodaa download Hagaha Naturalization ku xusan video ah. Isticmaal hagahan sida aad maraan habka. Inta badan su'aalaha aad qabto laga jawaabo doonaan hagaha.
Talooyin iyo tusaale imtixaanka jinsiyadda aad
• Laga soo bilaabo markii sarkaalka Waxaa idin soo salaamaya, isaga ama iyada la imtixaami xirfadaha Ingiriisi. U hubso in aad si taxadar leh oo cad u hadal.
• Had iyo jeer runta sheeg hana dib macluumaad kasta. Sarkaalka ayaa laga yaabaa in macluumaadka adiga kugu saabsan ka kale. Haddii aadan jawaab ma oga ama ma xasuusan karo, waa iska caadi in aad sidaas dhihi. Sidoo kale waa caadi in u sheeg sarkaalka haddii aad fahmi weydo wax.
• Haddii aadan ku hadlin Ingiriis, isku day inaad hesho waqti si ay u tagaan fasallada Ingiriisiga ee bulshada. kuliyadaha maxalliga ah qaar badan, maktabadaha iyo xarumaha beesha ayaa bixiya fasalo lacag la'aan ah. Waxaad ka eegi kartaa FindHello si aad u hesho fasallada. Ama aad awoodid heli fasalo online halkan.
• Si aad caawimo qaado koorsada dhalashada Mareykanka ah aad ku gudubto imtixaanka. Haddii aad rabto in aad fasal tago ee bulshada, waxaad ka raadin kartaa meelaha halkan - badan oo fasalada ku qoran our qaybta Resources waa lacag la'aan. Ama waxaad ka qaadan kartaa fasalka Citizenship online lacag la'aan ah. Waad awoodaa saxiixdo halkan oo uu bilaabo mar kasta oo aad diyaar u tahay!
nasiib wacan la waraysiga! Xusuusnow:
aad xaq, in loo diyaar garoobo, iyo run.
fasalka dhalashada online free USAHello ee
USCIS macluumaadka dhalashada iyo khayraadka
Citizenshipworks adeegga codsiga online lacag la'aan ah